Kusho ukuthini ukuphupha kwezimpethu namagagot? Ukuchazwa kwengqondo yokulala
Ukuze uphuphe izimpethu kanye nezimbungulu: zizokwenzenjani izincwadi zephupho?
Iyini iphupho lezibungu? Ukuchazwa kwamaphupho
Ukuphendukela emangceleni nasezintabeni eziningi, ungaqonda ukuthi imbongolo ibonisa ukubola, ukuphelelwa ithemba, ubumnyama ngisho nokufa. Kodwa ingabe kukhona okufanayo nale maphupho mayelana nalezi zidalwa? Ake sisebenzise usizo lwabahumushi abathandwayo ukuze baqonde ukuthi izimpethu ziphikisana ngani nokuthi kufanele besabe izibikezelo? Ngaphambi kokufunda ngezansi, zama ukukhumbula ukuthi yiziphi izibungu, ukuthi wenzeni nabo nokuthi yiziphi imizwelo abazithola lapho bebonakala.
Kungani izimpethu ezimhlophe nezimpethu ziphupha?
Ekufuneni incazelo yalesi sithombe ezincwadini eziningi zephupho, ukuhumusha okufanayo okufanayo kungatholakala. Ngakho-ke, isibonelo, iphupho elinjalo landulela isifo esibi, okuzoba nzima kakhulu ukususa kuso. Njengoba kuchaziwe ekuhumusheni, lesi sifo sizoqhubeka futhi njengokungathi imbungu idla kuwe ngaphakathi. Kubantu abakade behlupheka nganoma isiphi isifo, izibungu ezincane ze-cadaverous zingase zifanekise ukuwohloka kwempilo noma ukuhlaselwa kwesifo esiyisisekelo.
Iqiniso lokuthi izibungu ezimhlophe emzimbeni ziphushulwa, zingabuye zithathwe ngokuthi zihunyushwa kabi. Kungabonisa futhi izinkinga zempilo. Kodwa okubaluleke kakhulu, iphupho libonisa ukuthi ngaphakathi kwakho ubolile, ngoba awukho imiqondo enjengesihawu, isihawu nesihe. Ulungele noma yini, ngenzuzo yakho siqu.
Ukubona izimpethu nokumemeza ngokwesaba noma ukudelela kusho ukuthi empilweni yakho kunzima izikhathi ezizayo. Ngeke ube nezinkinga zempilo noma imali, kodwa uzoba nesikhathi esinzima ohlelweni lokuziphatha.
Uma i-earthworm, ewuphawu lokuzala nokuchuma, ibilokhu iphupha, ungalindela ukuthuthukiswa esimweni sezimali. Imiphumela emihle ehlotshaniswa nebhizinisi noma eminye imisebenzi yomsebenzi nayo izokhuphuka intaba. Ukumba izibungu njenge-bait kusho ukuthi ungathola inzuzo kunoma yikuphi, ngisho nasebhizinisi elingenalutho.
Iyini iphupho lesibungu kumfazi?
Uma wabelana ngokuhumusha ngesisekelo sobulili, bese kuba besifazane, bayovame ukuhlotshaniswa nomndeni, ubudlelwane kanye nendlela yokuphila. Ngesiqingatha sabantu besifazane, lesi sithombe sonke sibhekisela kusengaphambili kwesifiso esinamandla noma inkohliso.
Ukushada ukubona ephusheni umzimba womzimba noma ukudla kusho ukungqubuzana okukhulu emndenini. Mhlawumbe, izoshukunyiswa izinkinga ezibonakalayo nokungahambisani nomlingani wakho. Zama ukubonisa ukubekezela nokuqonda empikiswaneni yakho ngesigamu sakho sesibili. Ukukhala nokudabuka ngeke kuholele kunoma yini enhle, kuzokwenza kube nzima kakhulu.
Amantombazane ayedwa angaphupha ngaleliphupho kuphela uma engekho oyedwa ofanelekayo kumbuthano wabo wabathandayo. Bonke abasolwa kuthiwa bafuna indima yekhethiweyo yakho, baphishekele imigomo ye-mercenary, noma ungahlose ukungena ebuhlotsheni obubi. Kubantu abasha ababajwayele, izincwadi zokuphupha nazo zikwaziswa ngokuqapha.
Izibungu ezimhlophe, ngokuvamile zixazulula ngokubola nokuwa, zingabuye zibe yisixwayiso sentombazane eshada. Kungenzeka ukuthi umlingani wakho ufihla kude kwakho nemininingwane ejabulisayo yokuphila kwakhe kwangaphambilini.
Njengoba usuvele wazi, uma izimpethu ziphupha - lokhu kuyisibonakaliso sokuqala okudingeka ugcine izindlebe zakho zivulekile. Zama hhayi kuphela ukubheka ngokuzungezile indawo ozungezile, kodwa futhi ucabangele izimfanelo zakho ezingokomoya.
Bheka ephusheni umfana othanda ukuthi ungubani?
Amaphupho ama-Erotic nemifanekiso
Kusho ukuthini ukulala ocansini?
Izakhiwo zokwelapha nezomlingo we-giddenite
U-Ernest Hemingway, i-biography
Ingxoxo no-Andrey Chernyshov
Irayisi ekhanyayo, inkukhu nesaladi yezithelo
Ukuthengwa kwamadoda ku-horoscope
Imidwebo ekhazimulayo yabantu abadumile ngo-Ephreli 1
Izakhiwo eziwusizo zomjunipha ne-heather
Ungayinakekela kanjani usana olubeletha ngemuva kokubeletha?
I-Lamoda Iqalisa Iphrojekthi Yomusa YaseRussia